Bjork - जरा संग आइसल्यान्डिक गायक। त्यो दुनिया जित्न व्यवस्थित। त्यो जन्म र शिक्षित थियो जहाँ जान्न चाहनुहुन्छ? सफलता को बाटो के हो? तपाईंलाई रुचि वैवाहिक स्थिति Bjork? हामी आवश्यक जानकारी साझेदारी गर्न तयार हुन्छन्। आफ्नो पढाइ आनन्द लिनुहोस्!
गायक Bjork: जीवनी
त्यो आइसल्याण्ड को राजधानी मा जन्म 21 नोभेम्बर, 1965 थियो - रिकिविक। उनको वास्तविक नाम Bjork Gvyudmyundsdouttir छ। के मा परिवार हाम्रो हेरोइन हुर्केका थिए? उनको बुबा बिजुली रूपमा काम गरे। एक आमा खेल स्कूलमा आइकिदो सिकाउनुभयो।
केही वर्ष Bjork को जन्म पछि, उनको आमाबाबुले छोडपत्र। बुबा अर्को महिला फेला र उनको परिवार गरे। हाम्रो हेरोइन को आमा निकै लामो एक्लो थियो। त्यो भेटे imposing मानिस, पूर्व guitarist पप समूह। यो सौतेनि Bjork भयो। उहाँले बच्चालाई संग एक साधारण भाषा फेला पार्न व्यवस्थित।
6 वर्षको केटी एउटा संगीत विद्यालय पठाइएको थियो। त्यहाँ Bjork पियानो र बांसुरी अध्ययन। हाम्रो हेरोइन कक्षाहरू धाउन खुसी हुन्छ। शिक्षकहरू उनको लागि एक उज्ज्वल भविष्य भविष्यवाणी। र आज हामी शब्दहरू आफ्नो साँचो आउन भनेर भन्न सकिन्छ।
पहिलो सार्वजनिक उपस्थिति Bjork स्कूल मञ्चमा ठाउँ लिए। केटी म प्रेम दिग्गज सानो Charlz को मुग्ध पार्ने संगीतको देखि प्रेम गर्न गाए। दर्शक थियो हरेकले उभिएर उनको applauded। शिक्षकहरूलाई 'प्रदर्शन रेकर्ड बालिका को एक र राष्ट्रिय रेडियो टेप पठाए। व्यवसायी सराहना उत्पादन सांगीतिक सामाग्री। चाँडै, Bjork परिवार संग रेकर्ड कम्पनी Falkinn को प्रतिनिधिहरु सम्पर्क गर्नुभयो।
1977 मा आफ्नो debut एल्बम, 12 वर्षीया गायक जारी। आइसल्याण्ड मा, त्यो एक "प्लेटिनम" स्थिति प्राप्त। सौतेनि र आमा गीतहरू रेकर्डिङ र डिस्क डिजाइन को विकास मा भाग लिए। एल्बम को बिक्री प्राप्त पैसा, भविष्य तारा लागि पियानो को खरीद मा खर्च भएको थियो। त्यतिबेलादेखि केटी लेखन गीतहरू संग पकड आउँछन्।
Bjork - गायक, जो एक किशोरी रूपमा ज्याज-फ्युजन समूह प्रस्थान सिर्जना गरेको छ। को मान्छे JAM80 को एक टीम संग सँगै काम गरे।
1982 मा, त्यो उच्च विद्यालय स्नातक। सँगै एक मित्र Jakob Magnusson यसलाई Tappi Tíkarrass समूह। हाम्रो हेरोइन एक soloist, गीतकार र arranger थियो। र याकूबले बास गिटार प्ले। डिसेम्बर 1983 बिक्री त्यहाँ भनिन्थ्यो जो मिरांडा आफ्नो पहिलो एल्बम थियो। चाँडै, गायक भएको Sugarcubes को संगीतकार भेटे। एक समय को लागि, त्यो नै मञ्चमा तिनीहरूलाई प्रदर्शन। त्यो त 808 राज्य र स्त्रिहरु Guðmundar Ingólfssonar जस्तै बैंड संग काम गरे।
1992 मा, त्यहाँ समूह Sugarcubes पतन भएको थियो। कि पछि, गायक Bjork (फोटो हेर्नुहोस्। माथि) एक एकल क्यारियर विकास सुरु गर्न निर्णय गरेको छ। त्यो लन्डन सारियो। लगभग तुरुन्त उहाँले उनको सहयोग निर्माता Nellie Hooper प्रस्ताव राखे। मानव व्यवहार - गायक को पहिलो एकल दर्शक केही महिना पछि प्रस्तुत गरियो। कसैले पनि यो गीत एक विश्वव्यापी हिट हुनेछ छैन कल्पना सक्थे।
एल्बम मानव व्यवहार धेरै Bjork द्वारा साथै लिखित, संयोजनमा Hooper बनाइएका काम गर्दछ गीतहरू प्रस्तुत गरेका थिए। फलस्वरूप, सम्पूर्ण छापा केही दिनको लागि दर्शक रेकर्ड बाहिर बेचे।
वर्षौंदेखि Bjork चिरपरिचित संगीतकार र उत्पादकहरु संग collaborated छ। तिनीहरूमध्ये Timbaland, माइकल Dreyvsa दाऊदले अर्नोल्ड र अरूलाई छन्।
Bjork कति एल्बम जारी? गायक वैश्विक संगीत उद्योग को विकास गर्न धेरै योगदान गरेको छ। उनको रचनात्मक piggy9स्टूडियो एल्बम मा, रंगीन क्लिप र संगीत सयौं दर्जनौँ।
धेरै प्रशंसक हृदय गायक Bjork मुक्त छ कि छैन भनेर थाहा गर्न चाहन्छु। दुर्भाग्यवश, हामी तिनीहरूलाई निराश हुनेछ। ज्ञात कलाकार विवाह गरे। र यो उनको दोस्रो विवाह हो।
1986 मा, पहिलो आइसल्यान्डिक गायक Bjork विवाह गरे। उनको विकल्प रचनाकार थोर Eldon थियो। त्यसै वर्ष को जुन तिनीहरूले एक आकर्षक सानो केटा थियो। सींद्री Eldon Thorsson नाउँ गरेकी एक केटा। वैवाहिक आनन्द लामो पछिल्लो थिएन। फिल्म रिलीज पछि "अन्धकारमा नर्तक," जोडी आधिकारिक विभाजित।
Bjork मा कलाकार Metyu Barni संग सम्बन्ध थाले। चाँडै त्यो न्यूयोर्क उहाँलाई साथ सारियो। छोरा उनको पूर्व-पति संग बसे। गायक केटा छोड्न थियो।
अक्टोबर 2002 मा, कुल छोरी बार्नी र Bjork। बच्चा सुन्दर नाम भनिन्छ - Isadora। गायक प्रिय थप एक बच्चा गर्न दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा गरौं।
अब तपाईं एक क्यारियर Bjork कसरी निर्माण गर्न थाहा छ। गायक संसारभरि बस्ने श्रोताहरू लाखौं हृदय जित्न व्यवस्थित छ। हामी उनको हरेक सफलता र परिवारको आनन्द इच्छा!
तारकीय जीवनी: Maykl Dzhekson - सबै उमेरका लागि पप राजा
तातियाना Degtyareva युक्रेनमा गरेको समूहबाट "Darkie"
गायक ELKA: जीवनी र क्यारियर
यो स्ट्रबेरी मानव शरीर गर्न उपयोगी छ?
किशोरीहरूको बारेमा हरर - मृत शरीर गणना
फिल्म "सात": समीक्षाएँ moviegoers
पानी आपूर्ति बिछाउने। विवरण
यौन संभोगको समयमा निर्माण विफलता: कारणहरू। पुरुषहरूमा क्षमता बढाउनको लागि